विशेष – Page 50 – Medianp
भीमार्जुन आचार्य भन्छन्, हुनेवाला प्रधानन्यायाधीशले नै नेताको घरदैलो चाहर्नु पर्ने अवस्थाले न्यायालयको गरिमा कहाँ पुग्छ ?
Media NPप्रकाशित मिति: सोमबार, बैशाख १०, २०७५०९:०६0
काठमाडौं, १० वैशाख । वरिष्ठ अधिवक्ता डा.भीमार्जुन आचार्यले न्यायालयमा देखिएको विकृतिबारे तिखो टिप्पणी गरेका छन् । अदालतलाई विवादमा ल्याउन राजनीतिक योेजनाअनुसार प्रधानन्यायाधीशको बहिर्गमन गराइएको घटनाले अहिले न्यायालयमा विभिन्न विसंगति देखिएको उनको टिप्पणी छ । आफ्नो
प्रचण्डसँग ठोस सहमति नभएसम्म एमाले केन्द्रीय र स्थायी समिति बैठक नबस्ने
Media NPप्रकाशित मिति: शुक्रबार, बैशाख ०७, २०७५१३:४३0
काठमाडौं, ७ वैशाख । पार्टी एकताको विषयमा छलफल गर्न भन्दै एमालेले बोलाएको केन्द्रीय र स्थायी समिति बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ । वैशाख ९ गते एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकताको घोषणा गर्ने भनिएको थियो
जेल चलानपछि दिपक मनांगेको सांसद पद खारेज हुने
Media NPप्रकाशित मिति: शुक्रबार, बैशाख ०७, २०७५११:५१0
काठमाडौं, ७ वैशाख । ज्यान मार्ने कसुरमा दोषी ठहर भई पाँच वर्ष जेल बस्नुपर्ने भएपछि राजीव गुरुङ उर्फ दीपक मनांगेको सांसद पद खारेज हुने भएको छ । गत मंसिर १० मा मनाङ प्रदेश सभा सदस्यमा
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा लगातार तीनवटा ठूला विमान दुर्घटना, विमानस्थल असुरक्षित भएको सन्देश
Media NPप्रकाशित मिति: शुक्रबार, बैशाख ०७, २०७५०८:३२0
काठमाडौं, ७ वैशाख । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा लगातार तीनवटा ठूला विमान दुर्घटना भएपछि चिन्ता उत्पन्न भएको छ । काठमाडौंबाट मलेसियाको क्वालालम्पुर उड्न लागेको मालिन्दो एयरको जहाज दुर्घटनाबाट जोगिएको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा बिहीबार राति
काठमाडौंमा ट्याक्सीले ठगे, जान मानेनन् ? कल सेन्टरमा फोन गरी सारथी क्याब बुक गर्नोस्
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: बुधबार, बैशाख ०५, २०७५०९:३२0
काठमाडौं, ५ वैशाख । काठमाडौंमा ट्याक्सी ठगीका गुनासा नयाँ होइनन् । मिटरमा नहिँड्ने, मनोमानी ढंगले भाडा लिने र मिटरमै हिँड्न परे पनि बिगारेर बढी पैसा असुल्ने ट्याक्सी गठीका नुमना हुन् । यस्ता खालका ठगीको शिकार
नयाँ बर्षमा अपेक्षाः सुधार र परिवर्तन
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: शनिबार, बैशाख ०१, २०७५०८:१८0
टकु क्षेत्री देश नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ । संविधान अनुरूप भएका तीन तहका निर्वाचन मार्फत तीन तहमै नयाँ सरकार बनेका छन् । सात दशक लामो राजनीतिक अस्थिरताको लगभग अन्त्य भएको छ, र मुलुक स्थायीत्व तर्फ
तीन महिनासम्म सर्वेन्द्र खनाललाई ‘स्यालुट’ नगरेरै बिदा भए डीआईजी रमेश खरेल
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: बुधबार, चैत २८, २०७४१५:२१1
काठमाडौं, २८ चैत । डीआईजी सर्वेन्द्र खनाललाई सरकारले आईजीपीमा बढुवा गरेपछि डीआईजी रमेश खरेलले बुधबार राजीनामा दिएका छन् । गएको साउन महिनामा वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक (एसएसपी)बाट सर्वेन्द्र र रमेशलाई डीआईजीमा सरकारले बढुवा गरेको हो । सरकारले
२०७४ लाई फर्केर हेर्दा : तीन तहमा जनप्रतिनिधि, जनतालाई भने शून्य हात लाग्यो
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: बुधबार, चैत २८, २०७४१३:५६0
काठमाडौं, २८ चैत । वर्ष २०७४ राजनीतिक रुपमा ठूलो उपलब्धी हात पारेको वर्षमा रुपमा रह्यो । तर, जुन तवरले राजनीतिक उपलब्धी हात पर्‍यो सोहीअनुसार नागरिकले भने परिरवर्तनको अनुभूति गर्न सकेनन् । यस वर्ष स्थानीय, प्रदेश
पुष्कर कार्कीलाई आईजीपी बनाउन शीतल निवासको ‘प्रेसर’, माओवादीमा असन्तुष्टि
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: सोमबार, चैत २६, २०७४१०:००0
काठमाडौं, २६ चैत । सरकार सञ्चालनमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले एकलौटी गरेको भन्दै माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरूले तीन दिनअघि छुट्टै भेला गरे । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल निवासमा भएको भेलामा प्रधानमन्त्री ओलीले कसैसँग सल्लाह नै नगरी मन्त्रिपरिषदबाट
यसरी सुरक्षित राख्नुस् आफ्नो मोबाइल
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: मङ्गलबार, चैत २०, २०७४१७:१०0
मोबाइल हाम्रो जीवनशैलीको महत्वपूर्ण पाटो बनिसकेको छ । मानिसका हातमा एउटा होइन, विभिन्न ब्रान्डका २–३ वटा मोबाइल हुन थालेका छन् । तर, हजारौँ मूल्यका यी सामग्री सामान्य कुरामा ख्याल गर्न नसक्दा चाँडै बिग्रन सक्छन् ।
३९ बर्ष पुगे ‘स्किल किङ’ रोनाल्डिन्हो, यस्ता छन् उनका रोचक किस्सा